KNOWLEDGE Archives - Page 294 of 355 - ApannPyay Media
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး၏ သီတင်းကျွတ်လ ..လာဘ်လာဘ ဖွင့် ကျင့်စဉ်
October 16, 2020 by ApannPyay Media
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး၏ သီတင်းကျွတ်လ ..လာဘ်လာဘ ဖွင့် ကျင့်စဉ် သီတင်းကျွတ်လ ..လာဘ်လာဘ ဖွင့် ကျင့်စဉ် .. ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော် သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁) ရက် နေ့ တွင် နံနက် (၄:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ဖယောင်းတိုင် (၁) တိုင် (၅:၀၀) နာရီ တွင် (၁) တိုင် … (၆) နာရီ တွင် (၁) တိုင် ပူ ဇော် ပါ ။ ထိုနည်းတူ ည နေ (၅) နာရီတွင် ၁ တိုင် (၆) နာရီ တွင် ၁ တိုင် (၇) နာရီ တွင် (၁) တိုင် … Read more
မြောင်မြို့ ဆင်ဂေါင်းတောင်မှ ကျောက်နဂါး ကျော က်နဂါးဘုရား(စစ်ကို င်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင်မြို့ ဆင်ဂေါင်းတောင်) လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း လေးသန်းခန့်က အင်ကြင်းပင်ကြီး လဲကျရာမှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပရိုင် းမိတ် အင်ကြင်းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဖြစ်တယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသီများက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ အရှည် (၆၅) ပေရှည်တဲ့ နဂါးတကောင်ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အင်ကြင် းကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကြီးကို ရွှေတွေပိန်းနေအောင်ချထားပြီး စေတီတစ်ဆူ တည်ထားပါတယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ ယုံကြည်သူတွေကတော့ အတိတ်တဘောင်အတိုင်း ပေါ်တော်မူ ကျောက်နဂါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ထူးခြား တာတစ်ခုခုဆို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ ရောထွေးလိုက်တာ အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ဘုရားဖူးလာသူတွေအဆိုအရ မိသားစုတွေ ဥမကွဲသိုက်မပျက် အဆင်ပြေစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျောက်နဂါးအသိုက်က နှစ်ေ ပါင်းများစွာမပျက်စီးပဲတည်ရှိနေပြီး နဂါးကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ လုံးဝန်းနေတဲ့ ကျောက်လုံးတွေ (သူတို့ကတော့ နဂါးဥလို့ပြောတာပါပဲ) ပြပြီးသက်သေတည်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အမြီး ဘက်က ကြည့်ရင် … Read more
October 15, 2020 by ApannPyay Media
ယခုနှစ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပြီ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယခုနှစ် (၂၀၂၀ – ၂၀၂၁) ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများသည် လက်ရှိစနစ်ဟောင်းစာ(သင်ရိုးဟောင်း)ကို ယခုနှစ်နောက်ဆုံးထား၍ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ဖြေပြီး အကယ်၍ ကျရှုံးသော သူများကတော့ နောက်၂ နှစ်ထိ (၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ နှင့် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ထိ) လက်ရှိစနစ်ဟောင်းစာ (သင်ရိုးဟောင်း)ကိုဖြေဆိုခွင့်ရှိသည်ဟု တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ သည် Grade – 10 စနစ်သစ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ တွင် Grade – 11 စနစ်သစ် ဖြစ်သည်။ … Read more
ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် . သွားလဲ တနေ့ ၂ကြိမ်တိုက်ပါရဲ့နဲ့ ခံတွင်းနံ့ နံနေရင်
ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် . သွားလဲ တနေ့ ၂ကြိမ်တိုက်ပါရဲ့နဲ့ ခံတွင်းနံ့ နံနေရင် မဂ်လာပါ ဆရာ ကျမ အသက် ၃၃နှစ် အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် ဆရာ။ အစာအိမ်ကတော့ အပူအစပ်စားရင် နည်းနည်းအောင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က အပူဓာတ်များလို့ အသားက အမြဲ ပူနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းလဲမှန်ပါတယ် ..အဲ့တာကို ခံတွင်းနံ့ နံလို့ပါဆရာ။ သွားလဲ တနေ့ ၂ကြိမ်တိုက်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတိုင်းလဲ ပလုတ်ကျင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ နံတာ မပျောက်သွားပါဘူး။ ခံတွင်းအနံ့နံ တာကိုကိုယ့်ဖာသာသိနေတော့ သူများနဲ့စကားပြောရမှာ စိတ်ကမလုံဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့ပျောက်ဆေးတွေလည်းသုံးဖူးပါတယ်။မရပါ။ ခံတွင်းအနံ့နံ ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါလားဆရာ။ ဝမ်းထဲမှာ လေပူရှိလို့ပါ။ မနက်ရေမချိုးမီ ဆန်ဆေးရေအကြည်တစ်ဖန်ခွက်သောက်ပါ။ ခံတွင်းအနံ့တက်တာသက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ ဆန်ဆေးရည်ကအအေးပါ။ အပူကိုနိုင်ပါတယ်။ အုန်းစိမ်းရည် တစ်ပါတ်ကို တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ တမာရွက်ပြာချ … Read more
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ် နဲ့ အဆီဖုတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ်ဆေးနည်း
ဝက် ခြံ တင်း တိတ် အ မာ ရွတ် နဲ့ အ ဆီ ဖု တွေ ကို သက် သာ ပျောက် ကင်း စေ တဲ့ အိမ် တွင်း ဖြစ် ဆေး နည်း ဝက် ခြံ တင်း တိတ် အ မာ ရွတ် နဲ့ အ ဆီ ဖု တွေ ကြောင့် စိတ် ညစ် နေ ရရင် … ၊ အ မဲ စက် တွေ ကြောင့် စိတ် ညစ် နေ ရ တယ် ဘာ လုပ် … Read more
အသည်း ပျက်စီး နေပြီ ဆိုတာ ပြသနေ တဲ့ အဓိကလက္ခဏာ (၇)မျိုး အကြောင်း
အသည်း ပျက်စီး နေပြီ ဆိုတာ ပြသနေ တဲ့ အဓိကလက္ခဏာ (၇)မျိုး အကြောင်း (၁) မျက်လုံးနဲ့အသားအရောင်ဝါလာခြင်း အသားအရေနဲ့ မျက်လုံးတွေ ဝါနေတယ်ဆိုရင် အသည်းက ပြဿနာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်လို့ တံတွေးတွေကပါ ဝါကျင်ကျင်အရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းသွားပြသင့်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ (၂) ဝမ်းဗိုက်အလွန်ဖောင်းလာခြင်း ဝမ်းဗိုက်နေရာက အမြဲလိုလို ဖောင်းနေတယ်၊ နေရထိုင်ရတာလည်း သက်တောင့် သက်သာမရှိဘူး၊ အမြဲလိုလို ပြည့်အင့်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်နေတယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်လို့ ထင်ရလောက်အောင် ဝမ်းဗိုက်က ဖောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်း အသည်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ အသည်းက သူ့ဆီ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အရည်တွေကို ကောင်းကောင်း မစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခါ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဆီ အရည်တွေ ရောက်လာပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတာပါ။ အသည်းမကောင်းတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်အပြင် ခြေထောက်နဲ့ … Read more
နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့၏ဩဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့၏ဩဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့၏ဩဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့၏ဩဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီး ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တခေမိန္ဒာစာရ သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ (အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ) စတုဘုမ္မိကနိကာယဂဏနာယက (ငှက်တွင်း) အကျိုးတော်ဆောင် ယနေ့ မနက်က ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားကြောင်းသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (သာသနာရေး)၊ဝန်ကြီးရုံး၊ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းဝင်းက Myanmar Harp ကိုပြောသည် “ဆရာတော်ကြီး ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားပါပြီ။အောက်တိုဘာ ရရက်နေ့က ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ပါတယ်။နောက် သင်္ဃန်းကျွန်းဆေးရုံ၊နောက် ဧရာဝတီကုသရေးဝင်တာကို အောက်တိုဘာ ၁၁ရက်နေ့ က ပြောင်းရွှေ့ကုသပါတယ်။ဒီနေ့ မနက် ၅နာရီ ၅၅မှာ ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားသည့် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တခေမိန္ဒာစာရ သည် သက်တော် (၆၉)၊ သိက္ခာ (၄၉)ဝါ … Read more
ဦးဦး ရေ သားသား တို့က ဘယ်နှစ်ရက်နေပြီးရင် အိမ်ပြန်ရမှာလဲတဲ့
ဦးဦး ရေ သားသား တို့က ဘယ်နှစ်ရက်နေပြီးရင် အိမ်ပြန်ရမှာလဲတဲ့ Positive သမားရဲ့ contact လေးတွေသွားခေါ်ခဲ့တယ် ကလေးကမေးတယ် “ဦးဦး ရေ သားသား တို့က ဘယ်နှစ်ရက်နေပြီးရင် အိမ်ပြန်ရမှာလဲ” ဆိုတဲ့မေးသံလေးကြားတော့ ကျွန်တော်လို လူကြမ်းကြီးမျက်ရည်စို့ခဲ့ရတယ်..😔 aung thaw (5star) စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ ကိုမြင့်နိုင်ရဲ့မွှေချက်က အမြန်ဆုံးရောဂါပျောက်ကင်း ပီး အိမ်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လာနိုင်ပါစေ သားသားတို့ရယ် ကလေးတွေ contact ပါတာ စိတ်မကောင်းဆုံးဘဲ ဦးဦး ေရ သားသား တို႔က ဘယ္ႏွစ္ရက္ေနၿပီးရင္ အိမ္ျပန္ရမွာလဲတဲ့ Positive သမားရဲ့ contact ေလးေတြသြားေခၚခဲ့တယ္ ကေလးကေမးတယ္ “ဦးဦး ေရ သားသား တို႔က ဘယ္ႏွစ္ရက္ေနၿပီးရင္ အိမ္ျပန္ရမွာလဲ” ဆိုတဲ့ေမးသံေလးၾကားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လို လူၾကမ္းႀကီးမ်က္ရည္စို႔ခဲ့ရတယ္..😔 … Read more
ငုံးဥ နှင့် တွဲဖတ်ပြီး မစားသင့်သော အစားစာ
ငုံးဥ နှင့် တွဲဖတ်ပြီး မစားသင့်သော အစားစာ ငုံးဥကိုတော့ မသိတဲ့ လူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ငုံးဥထဲမှာ ဆိုရင် ဘယ်လို အာဟာရများစွာ ပါဝင်တာကိုတော့ သိတဲ့သူ ရှားပါးပါလိမ့်မယ်။ ငုံးဥထဲမှာ ပါတဲ့ အာဟာရ တန်းဖိုးဟာ ဆိုရင် ကြက်ဥ နှစ်လုံးစာနဲ့ ညီမျှတယ် ဆိုတာကော သိကြ ပါသလား။ ငုံးဥဟာ လူ့ရဲ့ အဆုတ်နဲ့ သရက်ရွက်ကို အားကောင်း စေပါတယ်။ ငုံးဥကို စားသုံးသင့်တဲ့ သူတွေကတော့ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ သွေးအားနည်းတဲ့ သူတွေ၊ ချူချာတဲ့သူနဲ့ မီးဖွားပြီး ခါစ မိခင်လောင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် သွေးကြော ရှိတဲ့ သူတွေကတော့ ငုံးဥကို ပမာဏများစွာ မစားသင့်ပါဘူး။ ငုံးဥမှာ ပရိုတင်း၊အဆီ၊သံဓာတ် လက်စီသင် … Read more
ဗိုက်ပူ ဗိုက်စူလာသူများအတွက် ရေသောက်ရင်း ဗိုက်ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်း (အစားရှောင်ရန် မလို)
ဗိုက်ပူ ဗိုက်စူလာသူများအတွက် ရေသောက်ရင်း ဗိုက်ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်း (အစားရှောင်ရန် မလို) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလို အစားလျော့စရာမလိုသော ဗိုက်ချပ်နည်း။ ဒီနည်းလမ်းလေးက ယုမွန် ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးထဲကတစ်ခုပါ။ ဟိုးအရင်က ပေါင်ချိန် ၁၄၅ပေါင်ရှိခဲ့ဖူးတယ် အရပ်က ၅ပေ၇ဆိုပေမဲ့ အဲ့ပေါင်ချိန်နဲ့က ဝတဲ့ဘက်မှာ ရောက်နေတာပေါ့။ ပိုဆိုးတာက ဗိုက်ပူတာပါ။ ဝိတ်ချလိုက်တာ ပေါင်၁၀၀ဘဲရှိတော့တဲ့အထိပါ။ ခုတော့ ၁၂၂ပေါင်ပါ ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဝလာဝလာ ဗိုက်မပူလာတော့ဘူး။ တကယ်ထိရောက်တဲ့နည်းလေးပါ။ အစားရှောင်စရာမလိုပါဘူး ။သေချာပုံမှန်လေးလုပ်သွားရင် ဗိုက်ချပ်ပြီး ခါးသေးစေပါတယ်။ Gym ဆော့ဖို့လည်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေ အစားလည်းမရှောင်နိုင်တဲ့သူတွေ အဆီကျဆေးတွေ မသောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့နည်းပါ။ မနက်အိပ်ရာထထချင်းမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက် သောက်ပေးပါရေသန့်ဗူးကြီး 1Literရဲ့တစ်ဝက်-0.5liter) (ဒါမှမဟုတ်) သောက်နိုင်တဲ့သူက ၂ဖန်ခွက်သောက်ပေးပါ ပြီးမှ မျက်နှာသစ် အပေါ့ပါးသွားပါ။မနက်စာကို ရေသောက်ပြီး ၁နာရီကြာမှ … Read more
← Previous Page1 … Page293 Page294 Page295 … Page355 Next →